လွှတ်တော်ထဲတွင် စောင့်ကြည့်ရဦးမည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်က ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေကြမ်း တင - Yangon Media Group
ခေါင်းပေါင်း ပေါင်း၍ တိုက်ပုံအင်္ကျီ ဝတ်ဆင်ထားသည့် လူတစ်ဦးက အဖိုးအိုတစ်ဦးရှေ့သို့ ရောက်ရှိလာသည်။ အဖိုးအိုကို နှုတ်ဆက်စကားပြုသည်။ အဖိုးအိုက မမှတ်မိသဖြင့် နာမည်မေးသော ကြောင့် အနှီပုဂ္ဂိုလ်က ၎င်း၏နာမည်ကို ပြော ပြလိုက်သည်။ ၎င်းအမည်ကို ပြောပြလိုက်ချိန်တွင် အဖိုးအိုပြောလိုက်သည့်စကားက- ”ဟာ … ငါက မင်းသေပြီမှတ်တာကွ” ဟုဆိုသည့် ဂျာနယ်စာမျက်နှာထက်တွင်ပါလာသည့် တစ်ကွက်ကာတွန်းလေးကို ပြန်မှတ်မိခဲ့သည်။ ရေးဆွဲသူ၏အမည်ကိုမူ မမှတ်မိတော့။ ထိုကဲ့သို့ သရော်ရေးဆွဲထားသည့် ကာတွန်း ပေါင်းမြောက်မြားစွာ ရှိပါသေးသည်။ ကိုယ်စားလှယ်အချို့သည် မဲပေးသည့် ကာလများတွင် ပြည်သူများထံသို့ ရောက်ရှိလာ ခဲ့ကြပြီး ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီးသည့်အချိန်များ ၌ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများကို မေ့လျော့နေတတ်သည့် ဖြစ်စဉ်အချို့ကို ကာတွန်းဆရာများက သရော်ရေးဆွဲထားသည့် ရေးကွက်များလည်း ဖြစ်ပေသည်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် ပြည်သူများက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးလိုက်သည့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အရေးကြီး ပေသည်။ ရွေးချယ်မှုမှားယွင်းခဲ့ပါက ‘မဲပေးမှားရင် ငါးနှစ်တာခံစားရမည်’ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူများအကြား ပြောစမှတ်တွင်ပြီဖြစ်သည်။ ပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးလိုက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များသည် မိမိမဲဆန္ဒရှင်များလိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ် ငန်းများ၊ ဥပဒေပြုရေးများကို ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့အတူလွှတ်တော်များရပ်နားချိန်တွင် မိမိတို့၏မဲဆန္ဒရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံကာ လိုအပ်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးရန်လည်း လိုအပ်ပေသေးသည်။ (အုပ်ချုပ်ရေးစွက်ဖက်မှု မရှိစေရန်လိုအပ်) သို့သော် မဲဆန္ဒနယ်မြေအချို့တွင် ပြည်သူ့ ရွေးချယ်ခံကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် မိမိတို့၏ မဲဆန္ဒနယ်မြေသို့ အရောက်အပေါက်နည်းမှုများ ရှိခဲ့ကြသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ပြည်သူများ အနေဖြင့်လည်း ထိုကဲ့သို့ ကိုယ်စားလှယ်များကို အားမလိုအားမရဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်များ ရှိနေသည်။
”တချို့က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ တော်တော်ကို အရောက်ပေါက် နည်းတယ်။ နောက်တစ်ခါ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ် ဆောင်ဖို့အတွက်ရော အားနည်းတယ်။ အဲဒီ အတွက်ကြောင့် တချို့ဆိုရင် ငါတို့မဲပေးလိုက်တာ မှားပြီဆိုပြီးပြောကြတယ်”ဟု ပြည်သူ့လွှတ် တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ပြည်သူများ ခံစားရပုံနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောပြသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်ပင် ပြည်သူများအနေ ဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးချယ်တင်မြှောက် ခွင့်ရှိသကဲ့သို့ ထိုကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် အလုပ်တာဝန်များ လစ်ဟင်းခြင်း၊ ပြည်သူ့တာ ဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်မှုမရှိခြင်း များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ ပျက်ယွင်းခြင်းများရှိခဲ့ပါက ကိုယ် စားလှယ်အဖြစ်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည့် ဥပဒေတစ်ရပ်ကို လွှတ်တော်အတွင်း ပြန်လည် ဆွေးနွေးတော့မည်ဖြစ်သည်။
ထိုဥပဒေကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်ရန် ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်အထိ ဥပဒေ မူကြမ်းအဆင့်ဖြင့်သာ ရှိနေသေးပေသည်။ အဆိုပါဥပဒေကို ပြီးခဲ့သည့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသက်တမ်းအတွင်းကလည်း ဆွေးနွေးမှုများရှိခဲ့သေး သည်။ ထိုဥပဒေအား လွှတ်တော်တွင်းရှိ နိုင်ငံ ရေးပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဥပဒေ ကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီများ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသေးသည်။ သို့သော် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသား လွှတ်တော်မှ သဘောထားကွဲလွဲချက်များထွက် ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဥပဒေအဖြစ် အထမမြောက်ခဲ့ဟု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ဆိုကြသည်။
အကြောင်းမူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခွင့်ဥပဒေကြမ်းတွင် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ မဲဆန္ဒနယ်မြေရှိ မဲဆန္ဒရှင်တစ်ရာခိုင်နှုန်းမှ ကန့်ကွက်တိုင်ကြားလာပါက ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့် စိစစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပါရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ တစ်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်သက်မှတ်မှုအပေါ် သဘောထားကွဲလွဲခဲ့ကြခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ စိစစ်၍ မှန်ကန်ပါက အရေးယူနိုင်သည်ဟု ဆက်လက်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတွက် ထိုအချက်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် ဆန့်ကျင်နေခြင်းကြောင့် ပြင်ဆင်ရန် အခက်တွေ့နေခြင်းလည်း ဖြစ်ပေသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေသည် ဥပဒေလှိုင်းဂယက်ထဲတွင် လွင့်မြောနေဆဲဖြစ် ပြီး ဥပဒေတစ်ရပ်အဖြစ် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ယခင်အစိုးရသက်တမ်းအတွင်းမှ စတင်ကာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ယင်းဥပဒေသည် လက်ရှိအချိန်ထိပင် ဥပဒေကြမ်းအဆင့်ဖြင့်သာ ရှိ နေခြင်းကြောင့်လည်း မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ၏အခွင့်အရေးကို ဆုံးရှုံးစေသကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြည်သူအချို့က ထောက်ပြပြောဆိုမှုများ ရှိလာချိန်လည်းဖြစ်သည်။
လွှတ်တော်တွင်းသို့ ဒုတိယခြေလှမ်းနေတဲ့ ဥပဒေ
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း (၉)ပါ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းပြဋ္ဌာန်းချက်ပုဒ်မ ၃၉၆ ၌ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အား နိုင်ငံတော်၏ ကျေးဇူးသစ္စာတော်ကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန် ခြင်း၊ အကျင့်သိက္ခာ ပျက်ပြားခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၏ အရည်အချင်း ပျက်ယွင်းခြင်း၊ ဥပဒေအရပေးအပ်သော တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာမဆောင်ရွက်ခြင်း များ ရှိခဲ့ပါက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မှ ရုပ်သိမ်းနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ထိုသို့ရုပ်သိမ်းရာ၌ သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်၏ မူလမဲဆန္ဒရှင်များအနက် အနည်းဆုံး တစ်ရာခိုင်နှုန်းတို့မှ တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလို သော ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ပတ်သက်သည့် တိုင်တန်းချက်ကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော် မရှင်ထံသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အနေဖြင့် တိုင်တန်းလာမှုအား ဥပဒေနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ထိုကိုယ်စား လှယ်အား ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ် စားလှယ်ဖြစ်သော်လည်းကောင်း ပြန်လည်ချေပ ခွင့်ပေး၍ စွပ်စွဲချက်မှန်ကန်ပါက ထိုသူကို ကိုယ် စားလှယ်အဖြစ် ဆက်လက်ထမ်းရွက်စေရန် မသင့်ကြောင်း ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရ မည်ဟု ဖွင့်ဆိုထားခြင်းကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့် ပြဋ္ဌာန်းမည့်ဥပဒေတို့အကြား ကွဲလွဲ မှုရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ”ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်နေတဲ့အခါမှာ ဒါတွေကို လွှတ်တော်ဘက်က ပြင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးသွားမယ်”ဟု နိုင်ငံရေးလေ့ လာသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးတင့်ကိုက မှတ်ချက်ပြု ပြောဆိုသည်။ ထိုကြောင့် အဆိုပါဥပဒေကြမ်းကို လာမည့်နှစ်သစ်ကူးကာလများအပြီး ကျင်းပမည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ပြန်လည်ဆွေး နွေးသွားမည်ဟု ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက ပြောဆိုထားသည်။ ထိုဥပဒေအား ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်က ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ကာ ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းအတွင်းက ဥပဒေကြမ်းကော်မတီထံသို့ ပေးပို့လာခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
”ပထမငါးနှစ်မှာလည်း လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အခုလဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုးဘက်ကလည်း မေးခွန်းတွေမေးလာတာ ရှိတယ်ပေါ့။ ဆိုတော့ ဒါကော်မရှင်ဘက်လာဖြေတော့လည်း အဆင်သင့်ရှိနေပြီလို့ ပြောတယ်။ ဒီလွှတ်တော် ကြီးက လာတင်ပါလို့ မပြောသေးတဲ့အတွက် သူတို့မတင်ရသေးဘူးလို့ ပြောတယ်။ ဒီဟာက အန်တီတို့ ပြည်သူတွေဘက်ကတော့ ကိုယ်ကမဲပေးလိုက်တဲ့ လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကျေး ရွာကိုလဲမလာဘူး။ ထိထိရောက်ရောက် လုပ် ပေးတာတွေလဲမရှိဘူးပေါ့။ ဆိုတော့ ဒီလိုဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူတွေ လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ တိုင်တန်းလို့ရတယ်။ ဒါက တော့ ပြည်သူတွေဘက်ပေါ့”ဟု ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေက ပြောသည်။ ပြည်သူများက ရွေးချယ်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်အတွက် မိမိတို့မဲဆန္ဒရှိ တစ်ရာခိုင်နှုန်းမှ လက်မှတ်ရေး ထိုး တိုင်တန်းနိုင်သည့်ပုဒ်မ ပါဝင်နေခြင်းကြောင့် မလိုလားအပ်သည့်ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ကိုလည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ က ထောက်ပြပြောဆိုကြသည်။
ထို့အပြင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရုပ်သိမ်းနိုင်သည့် ဥပဒေကြမ်းတွင် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူတစ်ရာခိုင်နှုန်းမှ လက်မှတ်ရေးထိုးတိုင်တန်းနိုင်ခြင်းကလည်း ပါတီတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမှ အပြန်အလှန် လီဆယ်၍ တိုင်တန်းမှုများရှိလာ နိုင်ကြောင်းကိုလည်း သတိပြုသင့်ကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုကြသည်။ ”ပြည်သူတွေရဲ့အလိုကျ ပြည်သူတွေက တောင်းဆိုလို့ လုပ်တယ်ဆိုပြီး လုပ်ရင်တော့ တကယ်တမ်းဥပဒေတောင်ဖြစ်မလာဘဲ ဥပဒေဟာ အခက်အခဲတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်လဲ ဒါ မကောင်းဘူး။ အဲဒီတော့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်တဲ့အခါ မှာ ဒါလေးကို ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုကို ထည့်ပေး လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဥပဒေကပြည့်စုံမယ်။ အားကောင်းမယ်။ တကယ်တမ်း လွှတ်တော် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အနှောင့်အယှက်မရှိအောင် အလုပ်ဆက်သွားလို့ရအောင်အထိ ဖြစ်လာနိုင်မယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ လက်မှတ်တွေထိုး မိတ္တူ တွေအများကြီးဆွဲပြီး တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်၊ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် တိုင်နေမယ်ဆို ရင်တော့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ တော် တော်များများဟာ အမှုရင်ဆိုင်ရဖို့ အနေအထား မျိုး ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါဆိုရင် လွှတ်တော်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုလဲ ထိခိုက်နိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အလွယ်တကူနဲ့ တိုင်လို့မရနိုင်အောင် တစ်ခု တော့ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုတော့ မြှင့်သင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်”ဟု မြေပုံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်းက ထောက်ပြပြောဆိုသည်။
ထို့အပြင် အလွယ်တကူ တိုင်ကြားမှုများရှိပါကလည်း မမှန်မကန်တိုင်ကြားမှုများ ဖြစ် ပေါ်လာနိုင်သည့်အပြင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရခြင်းကြောင့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး၏ အခင်းအကျင်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း၊ လွှတ်တော်၏ဂုဏ်သိက္ခာအား ကျဆင်းစေခြင်းများလည်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင် ကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုကြသည်။ ဥပဒေတစ်ရပ်ပြဋ္ဌာန်းရာတွင် ယင်းဥပဒေသည် ပြည်သူများအတွက် အခက်အခဲမဖြစ် စေရန်နှင့် ဥပဒေတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား ရှုပ် ထွေးမှု မရှိစေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ပြည်သူများအနေဖြင့် တရားဥပဒေ၏ အရိပ်အောက်တွင် လုံခြုံစွာ ခိုလှုံနိုင်သည့်အပြင် အစိုးရလျှောက်လှမ်းနေသည့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း အထောက်အကူပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ထို့အတွက်ကြောင့်ပင် လာမည့်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးအတွင်း ဆွေးနွေးတင်ပြရန် ဆောင်ရွက်နေသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေမူကြမ်းသည် ပြည်သူများအတွက် အမှန်တကယ်အသုံးဝင်နိုင်၊ အကျိုးရှိစေနိုင်မည့် ဥပဒေတစ်ရပ်ဖြစ်ရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် အမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်နေသည့် ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိ စေမည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်မျိုး ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များက ဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ယင်းဥပဒေအပေါ် မည်ကဲ့သို့ဆွေးနွေးမှုများဖြင့် ထွက်ပေါ်လာမည်ကို လေ့လာ စောင့်ကြည့်ရမည် ဖြစ်ပေသည်။
အိန္ဒိယတွင် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ် လူငါးဦးသေဆုံး
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုက်ပွန်ပီယို မြောက်ကိုရီးယားနှင့်ဆွေးနွေးရန် ပြုံယမ်းသိ
ဘာစီလိုနာ အသင်းသို့ ရောက်ရှိလာသည့် ၃၃ ဦးမြောက် ဘရာဇီးလက်ရွေးစင် ကစားသမားအဖြစ် ကော်တင်ဟို ?
မဲလ်ဘုန်းမြို့ လာထရိုဘီ တက္ကသိုလ်မှ ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့ရရှိမည့် မင်းသား ရှာရွတ်ခန်
ဒဏ်ရာပြဿနာများကြောင့် ငိုကြွေးနေမည်မဟုတ်ကြောင်း မော်ရင်ဟိုပြောကြား လီဗာပူးနှင့်ပွဲတွင် ??